दिगम्बर झा Archives - Technology Khabar
» दिगम्बर झा
दूरसंचार प्राधिकरणमा कार्यबाहक अध्यक्ष राख्न सरकारले गर्यो नियमावली संसोधन
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले दिएको राजीनामा सरकारले स्विकृत गरेसँगै सरकारले प्राधिकरणमा कार्यबाहक अध्यक्ष राख्ने तयारी गरेको छ । यसअघि दूरसंचार प्राधिकरणमा दोस्रो पटक नियुक्ती पाएपछि […]
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाको दाबी- तीन वटा टेलिकम सेवाप्रदायक भए पुग्छ
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगरम्बर झाले नेपालमा तीन वटा टेलिकम सेवा प्रदायक भए पुग्ने बताएका छन् । उनले अहिले सेवा प्रदायकहरुको संख्या धेरै भएपनि ती कम्पनीहरुको सेवाग्राही भने […]
फ्रिक्वेन्सी अक्सनको तयारीमा दूरसंचार प्राधिकरण, मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा पनि खुला गरिने
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पहिलो पटक फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) मार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा प्राधिकरणले दुई ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सीहरु अक्सन गर्ने तयारी गरेको छ । फ्रिक्वेन्सी अक्सनको […]
विकास समितिले सोध्यो- दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नै किन नियुक्त गरियो ?
काठमाडौँ । संसदको विकास समितिले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष दिगम्बर झालाई नियुक्ती गर्नाको कारणहरुको बारेमा प्रश्न उठाएको छ । बिहिबार बसेको विकास समितिको बैठकले दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई नियुक्ती गर्नाको […]
दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने-सम्झनुस्, म केहि महिनाको लागि विदेश गएको थिएँ
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा नियुक्त अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको तलब खाने बाटो खोलेका छन् । अध्यक्ष झाले प्राधिकरणमा पदबहाली गर्दै गत आर्थिक वर्षको प्रशासनिक खर्चको २५ प्रतिशतसम्म रकम […]
दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण(एनटिए)को अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले झालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । सरकारले अध्यक्ष झालाई ५ वर्षको लागि […]
दुरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस, कसको संभावना अधिक ?
काठमाडौं । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झासहित ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणकै […]
दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १५ जनाको आवेदन, यी हुन् अध्यक्षका दाबेदारहरु
अनुज राज । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १५ जना इच्छुक देखिएका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्षमा नयाँ नियुक्तिको लागि आवेदन माग गरिएकोमा अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म १५ जनाले […]
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण(एनटिए)को अध्यक्षको लागि नयाँ सूचना सार्वजनिक गरेर आवेदन माग गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि न्यूनतम मापदण्ड र योग्यता खुलाएर सरकारले खुला […]
दूरसंचार प्राधिकरण अध्यक्षबाट पद मुक्त गरिएका झाको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट दिगम्बर झालाई पद मुक्त गरेको विरुद्धमा परेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट आफूलाई […]